Ibhendi yokuHamba kweHip
Emva & Lumbar
Emuva & emahlombe
Bopha iqhiya yentloko
Amathanga kunye nenkxaso yethole
Uvavanyo lokwenyani lwabathengi
Uyilo lobugcisa iqela
Uhlobo olufanayo lokuxhasa umtya webhanti yosaziwayo
ngomphathi ku 20-12-12
Kukho umboniso odumileyo eTshayina kutshanje, apho iinkwenkwezi ezingama-30 zabasetyhini zikhuphisana khona kwinqanaba elinye, elingazisi nje kuphela abaphulaphuli ukuba lenze intsebenzo entle yoluntu, kodwa likwazisa iimveliso ezininzi ezinesimbo esifanayo, njengokulungiswa kwesimo sikaZhang Yuqi ibhanti kuqeqesho. Njengoko thina al ...
Ukungaqondani okune malunga ne squats
Ukomelela okungafaniyo kuneendlela ezahlukeneyo. Akunakwenzeka ukuba senze okufanayo ngokuzivocavoca okuqhelekileyo, kodwa kufuneka sifumane okufanelekileyo. Kungenxa yokuba ezinye izinto ezingalunganga azisiyonto ilungileyo kuthi kuphela, kodwa ziyenzakalisa imizimba yethu. Makhe ndazise ukungaboni ngasonye okukuko malunga ne-squattin ...
Uyikhetha njani idolo ixhasa ngokwenzululwazi
Ngaba uziva ungonwabanga emadolweni emva kokubaleka ixesha elide, kwaye abazali bakho bahlala bekhalaza ngeentlungu zedolo xa besaluphala? Ngaba kufanelekile ukuba uthenge inkxaso yamadolo kulondolozo? Eli nqaku liza kwabelana ngolwazi oluncedo malunga neephedi zedolo. Iipads ezahlukeneyo zamadolo zine f ezahlukeneyo ...
Imidlalo emithathu efanelekileyo ebusika
Ngexesha lasebusika elibandayo, ukuba unyanzelisa umthambo ofanelekileyo, awunakho ukulawula imiphunga qi kuphela, kodwa ukonyusa nokusebenza kwamajoni omzimba kwizicwili kunye namalungu kunye nokukwazi komzimba ukumelana nengqele yangaphandle. Iingcali ngezomzimba zicebisa ukuba ezemidlalo zasebusika kufuneka zikhululeke ...
Benza njani umthambo abantwana?
ngomphathi ku 20-11-28
Xa umntwana ekhula, akufuneki anikele ingqalelo kwindlela atya ngayo, kodwa kufuneka asebenzise umzimba wakhe ngokufanelekileyo, ukwenzela ukuphucula ukomelela komzimba womntwana. Ukuzilolonga rhoqo kunokomeleza ukhuseleko lomntwana. Ke, abantwana benza njani umthambo? 1. Ungavumela abantwana bakho ukuba babaleke okanye bakhwele ibhayisekile ...
Abadlali beNBA bakhusela njani amaqatha abo
Abahlobo abathanda imidlalo ye-NBA bayazi ukuba ukubonisa iziphumo ezingcono kumdlalo, abadlali baneendlela zoqeqesho eziqinisekileyo. Ke bazikhusela njani ekonzakalisweni ngexesha lezemidlalo? Masibone indlela abakhusela ngayo amaqatha abo. 1. Nxiba i-bandage Sebenzisa i-bandage ekhethekileyo ukubopha ...
Ulwazi malunga nebhayisikile
Kwiminyaka yakutshanje, ukuhamba ngebhayisikile bekuthe cwaka kuvela ezidolophini njengekhabhoni ephantsi, enobungqongileyo kwindalo kunye nendlela esempilweni yezemidlalo. Ukuhamba ngebhayisikile ngumzimba olunge kakhulu, kodwa musa ukukhwela nje nzima, kodwa ujonge nesimo sokukhwela esifanelekileyo, ukuze singabangeli injurie yezemidlalo ...
Ukonakaliswa komzimba okubangelwa kukubaleka okugqithileyo
Ebomini, isixa esifanelekileyo sokuzilolonga silungile kwimpilo yethu. Nangona kunjalo, ukusebenzisa umthambo ogqithisileyo kuyingozi emzimbeni, ke kufuneka sikhumbule ukuthatha isixa esifanelekileyo xa sisenza umthambo. Kuba ukugqithisa okugqithisileyo kunokubangela umonakalo, masithethe ngomonakalo ogqithileyo ...
Ungakuphepha njani ukonzakala kwezemidlalo xa uskiya
Xa kufika ubusika, abantu abaninzi bacinga ukuba imidlalo yasebusika iya kuncitshiswa, kodwa akunjalo. I-skiing ithandwa kakhulu kule mihla. Inomdla kwaye inemfashini, ke ihlala itsala abantu abaninzi, kodwa kwangaxeshanye, i-Skiing ikwayimidlalo eyingozi ekulula kakhulu ukuba yenzakale. Njengokuba si ...
Yintoni esinokuyenza ekhaya ngexesha lobhubhane
Ubhubhane wehlabathi ubanzima kwaye sele unefuthe elikhulu emsebenzini nakubomi bethu. Abantu abaninzi bahlala ezindlini ezivaliweyo ukunqanda ukosulelwa yile ntsholongwane. Ukuthintela ukuxinana kwabantu, iindawo ezininzi ezinje ngezikolo, iinkampani, iindawo zeentengiso, iijingi, njl. Azivunyelwanga ukuba zingene. Umntu ...
Ungakuphepha njani ukuzilolonga kakhulu?
Ngapha koko, uninzi lwabantu, kokukhona uzilolonga, ngcono, kuba uninzi lwabantu lusekude ukuba lufikelele kwinqanaba apho ukuzilolonga kakhulu kunokonakalisa impilo yabo. 1. Musa ukuba nemigangatho ephezulu kakhulu okanye amandla amaninzi: Abanye abantu bazibekela imigangatho ephezulu kakhulu, enjengokwamkela imaratho ...
Uyilungiselela njani imidlalo ngokufanelekileyo
Sonke siyazi ukuba umthambo unezibonelelo ezininzi, ke leliphi inani lomthambo elifanelekileyo? Ngaba kunokwenzeka ukuzivocavoca umzimba ngokuhamba nje ngokungxama? Namhlanje ndiza kuthetha ngale micimbi mibini, kwaye ndizise ngendlela yokuthintela umthambo ogqithisileyo. Ngamafutshane, ezemidlalo zinokwahlulahlulwa zibe ziindidi ezintathu: I f ...